यी लक्षणहरुले शरीरमा पानी कम भएको बताँउदछनः ग्रीष्मकाल स्वास्थ | Hamro Patro
बिहानको ११ : ४०
ब्लग - साहित्य / स्वास्थ्य
यी लक्षणहरुले शरीरमा पानी कम भएको बताँउदछनः ग्रीष्मकाल स्वास्थ
Suyog Dhakal - Jun 20 2017
पानी नै जीन्दगानी हो, पानी प्रशस्त पिउनुपर्दछ भन्ने हामीसबैलाई थाहा त छ तर पानी पिउनाले हुने स्वास्थ लाई फाईदा गर्ने कुराहरु हामीहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ । हाम्रो शरीरको हरेक भागहरुलाई राम्ररी कार्यगर्न र अन्य भागहरुसँग समन्वय गर्न पानी चाहिन्छ । मांशपेशीहरुमा शक्ति प्रदान गर्न, तापक्रम सन्तुलन गर्न, छालालाई सफा राख्न, पाचन प्रणाली सहज रुपमा चलाउन पनि पानी चाहिन्छ है ।
यो पनि हेर्नुहोस् : कसरी बच्ने सर्पको डसाइबाट?
पानीको कमी भएको खण्डमा स्वास्थकालागि अत्यन्त हानिकारक र भयावह अवस्था सम्म हुन सक्दछ है ।
आउनुहोस् १० वटा लक्षणहरुका वारेमा यहाँ चर्चा गरौ जसले तपाईको शरीरमा पानीको मात्रा कमि भएको जनाँउदछन्, यसता लक्षण देखिएमा सफा पानी पिउने गरौ है ।
१ः मुख सुक्ने गरेमा
ग्रिष्मकाल होस् या हिँउद नै किन नहोस पानी प्रश्स्त सेवन नगरेमा मुख सुक्ने समस्या देखिन्छ । मुख सुक्नु हामीलाई सामान्य लाग्दछ तथापी हामीले मुख सुक्ननै नदिने र सुकेमा तत्कालै पानी पिउने गर्न जरुरी छ । बजारमा हिँड्दा या यात्रा गर्दा मुख सुकेमा सहजै पाउने गुलिया र चिसा पेय पदार्थहरु हामी खाने गर्दछौ जुन स्वस्थवर्धक हुदैन । यसता गुलिया या नुनिला पेयहरु क्षणिक समाधान त होलान तर दिर्घकालिन फाईदा र स्वस्थ रहनकालागि मानव शरीरमा पानीको मुकाविला अन्य कुनै पेयले गर्न सक्दैन् ।
२ः छाला सुक्ने गरेमा
स्मरण रहोस मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो अगं छाला नै हो । पानीको कमी भएमा छालाक फोहोर सफा गर्ने क्षमतामा कमी आउने हुन्छ । पसिनाको निष्काशनमा कमी हुन आँउदछ । पानी प्रशस्त नपिउनाले छालाका रोगहरु जस्तै पिलो आउने, खटिरा आउने पनि धेरै हुनसक्दछ है ।
३ः जोर्निहरुमा दुखाईको अनुभव हुनु
कतै तपाईको जोर्निको दुखाई शरीरमा पानी कम भएर त हैन रु हुन त अन्य विभिन्न कारणले पनि यसतो हुन्छ तथापी पानीको कमी भएमा पनि जोर्निहरुमा पिडा हुन्छ है ।
हड्डी र जोर्निहरु को कार्य कुशलताकालागि पानी अत्यन्त जरुरी हुन्छ, पानीले जोर्नि र हाडहरुमा पोषक तत्व पूर्याउने अनि फोहोर कुराहरु बगाउने कार्य गर्दछ, पानी नभएमा या कम भएमा जोर्निहरु सुख्खा हुने र पिडा हुने हुन्छ ।
४ः माशंपेशी फर्किने या असाधारण रुपमा दुख्ने गरेमा
स्मरण रहोस् कि हाम्रो मांशपेशी सम्पूर्णरुपमा पानीले बनेका हुन्छन् । कुनै कार्य या व्यायाम गर्नु अगावै तसर्थ पानी पिउन र व्यायाम पछिपनि पानी पिउन जरुरी हुन्छ ।
पानीको पर्याप्त सेवनले माशंपेशीलाई बलियो बनाई माशंपेशी फर्कन दिदैन । फेरि माशंपेशीलाई सम्पूर्ण रुपमा नशा अर्थात स्नायूले नियन्त्रण गर्दछन र पानीको पर्याप्त सेवनले स्नायूलाई पनि स्वस्थ बनाँउदछ ।
पानी पिउनाले माशंपेशीलाई पर्याप्त फैलिन र खुम्चन पनि दिनेगर्दछ जसले गर्दा व्यायाम या कसरत गर्दा पनि शरीर दुख्दैन ।
५ः पर्याप्त भोजन गरिसकेपछि पनि भोको रहेको अनुभव हुनु
पानीको कमी भएमा शरीरलाई भोक को जागरण प्रति कमजोर बनाउदछ । कहिलेकाँही पानी को तिर्सना लागेका बेला भोक लागेको भनि ठानेर हामी खाना खानेगर्दछौ तथापी केवल प्यास र पानीको महत्व बुझ्न र सेवन गर्न जान्दैनौ । भोक र प्यास विचको फरक पहिचान गर्न एकदमै जरुरी छ र समय समयमा पानी पिउनु जरुरी छ ।
अरबको मरुभुमी देखि प्रशान्त महासागर छेउ सम्म
या हिमालको काख देखि मृत सागरको छेउसम्म
जहाँ बसेर यो पढ्दै हुनुहुन्छ ?
पानीको पर्याप्त सेवन हाम्रो स्वस्थको आधार हो ।